မစပ်စု| December 7, 2012 | Hits:1,207
27 | | အိမ်ကွင်းအဝေးကွင်း သီချင်းသရုပ်ဖော် ပြကွက်တခု
ထောင်ကြွေးကျန် ကျခံရသူ ဦးနေမျိုးဇင် ဖေ့စ်ဘုတ်ပါ အဟက်ခံရ
ထောက်လှမ်းရေး အကျဉ်းသား နှစ်ဦးကို လွှတ်ပြီးမှ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment 12345 GOALS December 7, 2012 - 2:52 pm	“အများကြီးတွေးလို့ရတဲ့ Message ကို ပေးလိုက်တာပါ။…. ဒီလိုမျိုး ပုံစံ နောက်နောင် မရေးတော့ပါဘူး။ အမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပါ” ဆိုပြီး တေးရေး တေးဆို သြရသက ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက တဆင့် တောင်းပန်လိုက် ပြန်ပါတယ်။ ( ဒါ တမင်လုပ်လွှတ်လိုက်မှန်းသိပါတယ်။ ) “ကျမတို့ သီချင်းထက် ညစ်ညမ်းတဲ့ သီချင်းတွေ အများကြီးပါ။ …..” (သီချင်းက ညစ်ညမ်းမှန်း ၀န်ခံထားပါတယ်။)
Reply	maypyo December 12, 2012 - 11:08 am	မကောင်းမှန်းသိရင်မဆိုသင့်ပါဘူး
Reply	နှိပ် / သင်း December 8, 2012 - 2:31 am	HIV / AIDS မပြန့်ပွားရေးစီမံကိန်းကို တိုက်ဖျက်ပေးတဲ့အတွက် အဆို့ရှင်(၂ယောက်)ကို “ …” တွေက ဂုဏ်ပြုကြမှာပါ။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ December 8, 2012 - 3:44 am	အင်္ဂလိပ်လို sex လို့ခေါ်တဲ့ ကာမနဲ့ ပတ်သက်တာ လူတိုင်းကြိုက်ပါတယ်။ ပျော်မွေ့ပါတယ်။ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ရသလောက် ခံစားချင်ကြ၊ ပြုချင်ကြပါတယ်။ လူရော တိရစ္ဆာန်ပါ သဘာဝအရ လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူနဲ့ အခြားသတ္တ၀ါတွေ ကွာခြားတာက လူဆိုတာ ဟိရိသြတ္တပ တရား ရှိရပါမယ်။ ဘာသာတိုင်းမှာ ဒါကို ဆုံးမမှု ပြုထားပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့မရှောင် အရှက်မဲ့ ပြုကျင့်တာနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တခြားစီပါ။ အရှက်တရားမဲ့ ပြုလို့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်တာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တာ မဟုတ်ပါ။ ထိုသူများသာ ပတ်ဝန်းကျင်လူထုကို မလေးစားတဲ့ လူမဟုတ်တဲ့၊ လူလို မကျင့်တတ်သူတွေပါ။
Reply	Burmath December 8, 2012 - 8:35 am	ငွေရှိတိုင်းထင်တိုင်း ကြဲတာပါနောက်တော့ ငွေလည်းကုန် ဘာမှဖြစ်မလာတဲ့လူတွေမြန်မာပြည်မှာအများးကြီးဘဲ။ဝမ်းနှုတ်ဆေးကို အပူ့ငြိမ်းဆေး ဆိုပြီး လုပ်ရောင်းတဲ့ ငွေကြေးခဝါချမှု့ ပါ၊ခိုးကူးခွေ ဒီလောက်များတဲ့ခေတ် ကြီးမှာ တကယ့် အဆိုတော် တွေတောင် လစ်ကုန်ပြီ။ဧကံန္တတော့နေရဲမာန် ရဲ့ ညီမ မေရဲမာန်ထင်တယ်၊သိပ့် မပောာ့ နဲ့နေရဲမာန်တောင် ငြိမ် သွားပြီ။ဒီတစ်ခါ စုံတွဲဆိုရင် လူရွှင်တော် ကင်းကောင် နဲ့ ဆို ပါလား
Reply	mm December 8, 2012 - 9:35 am	မကောင်းမှန်းသိရင် stage show မှာလည်း မဆိုပါနဲ့ညီလေးရေ မကောင်းတာကို ပိုတောင်းဆို ချင်တာ လူ့သဘာဝပါ
Reply	mm December 8, 2012 - 9:39 am	မကောင်းမှန်း သိရင် မဆိုပါနဲ့ သြရသရေ လူ့သဘောက မကောင်းတာကို ပိုတောင်းဆို တတ်ပါ တယ်
Reply	Mon- Kayin December 9, 2012 - 12:27 am	ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေကို ပေါ်ပေါ်တင်တင် လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ ကျွန်တော် တို့ ပြည်နယ်
Reply	haha December 9, 2012 - 8:44 am	ဒီကိစ္စ ပိတ်လို့ရမယ်များထင်နေကြလား။
Reply	onion ko December 9, 2012 - 12:58 pm	ဒီသီချင်းတင်မဟုတ်ဘူး မေခလာနဲ့ ကကော့တောင်ပြလိုက်သေးတယ်
Reply	မောင်ပျာလောင် December 10, 2012 - 11:47 am	ကောင်းလား အကို၊ ကောင်းလား အကို ဆိုပြီး ကျနော့ကားပေါ်တက်လာတဲ့ အာပုံသယ် ကုလားမလေးကဆိုတာကြောင့်၊ ကျနော်လည်း ဟဲ့ နင့်အာပုံ တူးနေတာကြောင့် မကောင်းဘူလို့ ပြောလိုက်တော့။ မကောင်းဘဲနဲ့အကိုက အကုန်စားသွားတော့၊ တူးလဲ ကောင်းတယ်မှတ်၊ မတူးလဲ ကောင်းတယ်မှတ် ဆိုပြီး ကားပေါ်က ဆင်းသွားတော့၊ ကားတကားလုံး ၀ိုင်းရယ်ကြ တာ ၀ါးလုံးကွဲမတပ်ဘဲ။ မမကြီး မစပ်စုရဲ့ ရှင်းလင်းချက်ဖတ်မှ ကျနော် စပယ်ရာ မောင်ပျာလောင် နားလယ်ပါတော့တယ် – – –
Reply	ဝေဖန်သူ December 11, 2012 - 9:58 pm	အဆိုတော် စောသက်ခင်များ..စိတ်သန့်သန့်လေးနဲ့ သီချင်းဆိုတယ် ညစ်ညမ်းတယ်လို့ မခံစားရဘုးဆိုရင် ဘယ်စာသား ကိုခံစားမှာလဲ……